साँझ देशभर दीपावलीको तयारी कालापानीसहितको नयाँ नक्सा संसदबाट आज पारित हुँदै, – live 60media
, काठमाडाैँ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिवर्तनका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशाेधन विधेयक पारित हुँदैछ । नयाँ नक्सासहितको निशान छाप परिवर्तनका लागि संसदमा रहेको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ शनिबार दिउँसो बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गर्न लागिएको हो ।
शनिबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सदनमा दफावार छलफलका लागि संशाेधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसुची छ । छलफलपछि संशोधन प्रस्तावमा सदनमा मतदान हुन्छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरू समेत संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएका छन् । संविधान संशाेधन प्रस्ताव पारित भएसँगै देशभर साँझ दीपावली गर्ने तयारी भएको छ । नागरिकहरूले स्वतस्पफूर्त रूपमा सरकारको जयजयकार गर्दै नेपाली भूमि फिर्ताका लागि सरकारले लिइरहेको पहलकदमीको प्रशंशा गरेका छन ।
नेपालको संविधानमा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था भाग–३१ संविधान संशोधन
← अभिनेत्री श्रद्धा कपुरले नेपाली यु्वक रोहन श्रेष्ठसँग बिहे गर्ने हल्ला सुनेपछि, बुबा शक्त्ति कपुरले दिए यस्तो जवाफ !
बन्दाबन्दीले पशुपति क्षेत्रको आयमा रु १० करोड कमी →